🥇 ▷ Macluumaadka Isticmaalayaasha Shabakada 'Instagram' ayaa si hoose udhacay ✅
Macluumaadka Isticmaalayaasha Shabakada ‘Instagram’ ayaa si hoose udhacay
FacebookKadib khayaanada macluumaadka macluumaadka isticmaalaha InstagramTo xado xogta isticmaale Waa la hadlay. Instagramter ayaa soo gabagabeysey wada shaqeyntii ay la laheyd shirkad suuq geyn, Hyp3r. Sida muuqata, Hyp3r, goobta jir ahaaneed ee isticmaaleyaasha, macluumaadka profaili iyo sawir macluumaadka sida daadinta si ay u bixiyaan adeegga xayeysiinta ka fiican.
InstagramBusiness Insider ayaa faafisay macluumaadka isticmaale ee shirkadda oo ah shuraako xayeysiis ah Thanks to websaydhkiisa. Isla markiiba, wuxuu soo saaray digniin sharci ah oo ku saabsan San Diego-based Hyp3r. Marka loo eego macluumaadka la helay Hyp3r, iyo sidoo kale macluumaadka sida meesha Barta Instagram xitaa looma qarin Instagram-ka. Wuxuu kaloo hayaa sheekadiisa.
Sarkaal ka tirsan shirkadda Instagraman ee dalka Turkiga ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay:
“Tallaabooyinka Hyp3r lama oggolaan oo waxay ku xadgudbeen siyaasadeena. Taasi waa sababta aan uga saarney madalkeenna. Waxaan sidoo kale qaadnay tallaabooyin aan kaga hortagno shirkadaha kale inay macluumaad ka soo baxaan boggaga dadweynaha.”
Jawaabta InstagramIn looga jawaabayo tallaabooyinkan, ayuu Madaxa Shirkadda Hyp3r ku sheegay bayaan ay soo saareen in aysan waligood soo bandhigin waxyaabo shaqsiyadeed ama macluumaad ah, laakiin kaliya ay baraha bulshada wadaagaan. In kasta oo tilmaanta Hyp3r ay sidan ku jirto, barta InstagramWe waxay arki doontaa haddii kalsoonidoodii Shakes la ruxin doono.